Nemanja Matic Oo Ciyaartii Ugu Muhiimsanayd Manchester United Ku Sheegay Kulanka West Ham, Kana Hadlay Waxa Uu Ka Filayo Bruno Fernandes - Gool24.Net
Nemanja Matic Oo Ciyaartii Ugu Muhiimsanayd Manchester United Ku Sheegay Kulanka West Ham, Kana Hadlay Waxa Uu Ka Filayo Bruno Fernandes
Nemanja Matic ayaa tilmaamay in ciyaarta Manchester United ay kula ballansan tahay West Ham kulanka ugu muhiimsan ee kooxdiisa ee xili ciyaareedkan, taas oo ay kaga xidhan tahay rajadooda halka ay horyaalka Premier League kaga dhamaysanayaan.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo ciyaartoydiisa ayaa saddex dhibcood ka sarrayn kara Leicester City haddii ay West Ham United ka badiso, ka hor inta aanay ciyaarta ugu dambaysa ku kulmin Man United iyo Leicester.
Qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee Manchester United ee 19ka ciyaarood ee xidhiidhka ahaa ee aan laga badin, waxa soo afjartay Chelsea oo Wembley ku garaacday, kagana reebtay tartanka FA Cup, laakiin Matic wuxuu ku kalsoon yahay in ciyaartoyda kooxdu ay guul-darradaas kasoo kaban doonaan.
Ruug-caddaaga reer Serbia oo ciyaar fiican muujinayay xili ciyaareedkan, waxa kale oo uu amaan u jeediyey Bruno Fernandes oo uu tibaaxay waxa uu ka filayo kulanka maanta, waxaanu yidhi: “Bruno waa ciyaartoy wanaagsan. Waxa dhamaantayo aanu qiimaynaynaa inuu naga mid yahay. Wuxuu leeyahay tayo badan oo lugihiisa ku jirta, waxaanu kooxda u keenay wax dheeraad ah, mustaqbalkana wuxuu muhiim u noqon doonaa Manchester United.
“Waxaanu isku daynaa inaanu si fiican ugu xidhiidhno gudaha garoonka, gaar ahaan, sababtoo ah marka kooxdu kubadda soo dhacsato, waa inaanu helno ciyaartoyda naga horreeya sida ugu degdegga badan ee ugu suurtogalsan. Mar walba waxaanu u baahanahay xidhiidhka noocaas ah, waqtiganna si fiican ayay noogu shaqaynaysaa. Dabcan, waanu ognahay in ciyaartii Chelsea aanay si fiican noogu shaqayn, laakiin waa inaanu aqbalno taas oo aanu ka jawaabno kulanka West Ham.”
Nemanja Matic wuxuu caddeeyey in Manchester United ay dib ugu noqotay guul-darradii Chelsea oo ay faaqidaad ku samaysay, ayna u diyaarsan yihiin sidii ay jawaab degdeg ah uga bixin lahaayeen kulanka West Ham
“Waa inaanu si degdeg ah u ilowno guul-darradii Chelsea, sababtoo ah, hadda waanu ciyaaraynaa, waxaananu ka fikiraynaa ciyaartayada ugu muhiimsan xili ciyaareedka oo aanu ku waajahayno West Ham.